Ny vonjy taitra amin'ny ranomasina
Tsy mbola tena zava-dehibe toy izany ny ranomasimbe misy antsika, na norahonana. Izy io dia mitondra ny toetrandro sy ny toetrandro, manome oksizenina ho an'ny rehetra ary proteinina ho an'ny maro. Na dia eo aza ny fanafihana avy amin'ny lafiny rehetra.
Fanjonoana tafahoatra, fandotoana ary fahasimban'ny toetr'andro. Ireo olana ireo dia manova ny ranomasimbe amin'ny fomba tsy mbola hitantsika hatrizay. Mandrotsaka ny ranomasimbe misy antsika izy ireo, ary mandrahona ny tahirin-trondro izay manome sakafo an'arivony tapitrisa sy fivelomana an-jatony tapitrisa.
Imbetsaka, tapaka ny ezaka hiadiana amin'ny hamehana an-dranomasina satria tsy mahavita mamaly ny filana — sy miaro ny zon'ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka.
Na izany aza, ireo vondrom-piarahamonina ireo no tena mamoy ny ainy noho ny firodanan'ny jono, ary ny tena mahazo tombony amin'ny fahombiazan'ny fiarovana.
Amin'ny fandraisana anjara sy fanetsiketsehana ireo mpanjono madinika monina eny amoron-dranomasina - ary miankina amin'ny - ny ranomasintsika, dia asehontsika fa mitondra soa ho an'ny olona sy ny zavaboary ny fitantanana ny ranomasina.
Hihaona amin'i Kokoly
Jereo ny tantarany
Ny vahaolana miafina amin'ny maso
Mino izahay fa ny famahana ny fanjonoana tafahoatra no hany zavatra mahery indrindra azontsika atao mba handresena ny hamehana an-dranomasina. Ary mino izahay fa ny fiankinan-dohan'ny olombelona amin'ny ranomasimbentsika no vahaolana niafina teo imason'ny olona.
Misy mpanjono mahazatra an-jatony tapitrisa any amin'ireo vondrom-piarahamonina lavitra sy ambanivohitra manerana izao tontolo izao. Miaraka amin'ny fanohanana sahaza, afaka manova ny fifandraisantsika amin'ny ranomasina misy antsika izy ireo. Miaraka amin'ny fanohanana mety, afaka manangana indray ny jono izy ireo, manamafy ny fivelomany ary manatsara ny fanjarian-tsakafo. Miaraka amin'ny fanohanana mety, afaka mamerina ny fiainana an-dranomasina izy ireo ary mitazona tontolo iainana mahasalama ho an'ny taranaka ho avy
Taorian'ny roapolo taona nanohanana ireo vondrom-piarahamonina mpanjono any amin'ireo firenena mahantra indrindra eto an-tany dia lasa vato fehizoron'ny iraka nampanaovin'ny Blue Ventures izany.